ရုပ်သံလိုင်း Istanbul Marmara ပင်လယ်အဆုံးသတ် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Istanbul Channel သည် Marmara ပင်လယ်အဆုံးသတ်သည်
12 / 12 / 2019 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
anal Istanbul Marmara ပင်လယ်အဆုံးသတ်
Istanbul Metropolitan Municipality မှHaliçသင်္ဘောကျင်း၏ 564 နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်“ ရေကြောင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို Hal ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောနေတာ။ Cemal Saydam က“ ပထမဆုံး MNAR ၏ 25 မီတာသည်ပင်လယ်နက်နှင့်၎င်းအောက်တွင်မြေထဲပင်လယ်ငန်သောပင်လယ်ရှိသည်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကြီးမားတဲ့ဟန်ချက်ညီမှုရှိသည်။ အကယ်၍ ရုပ်သံလိုင်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါကဤချိန်ခွင်သည်ပြတ်တောက်သွားပြီးမာမာရာပင်လယ်သေသွားလိမ့်မည်။ ”
Deniz အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) မှပညာရှင်များ၊ သတင်းစာဆရာများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရေကြောင်းကဏ္sectorမှကိုယ်စားလှယ်များပါ ၀ င်သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပင်လယ်ရေကြောင်းပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်ပင်လယ်ရေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပင်လယ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့် Canal Istanbul အပေါ်အမြင်များကိုဖော်ပြထားသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမစတင်မီအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးမှူး Ekrem Imamoglu ကမြို့နှင့် Marmara ပင်လယ်ပျက်စီးခြင်းကိုထပ်မံအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သဘာဝနှင့်ကစားခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်။ မရနိုင်ပါ။ Marmara ပင်လယ်သည်ဆက်သွယ်မှုအသစ်တစ်ခုအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည်အဓိကကျသောအစည်းအဝေးသုံးခုတွင်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဆယ်ခုကိုအဓိကထားပြီးHaliçသင်္ဘောကျင်းတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြproblemsနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအားအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် Istanbul ရှိပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို Dr. ဗိုလ်ကြီးÖzkan Poyraz မှညွှန်ကြားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးမိန့်ခွန်း။ ဒေါက်တာ Reşat Baykal သည်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိမြို့ပြပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏Dünအတိတ်၊ မျက်မှောက်ခေတ်နှင့်မနက်ဖြန် ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့သည်။ Seljuk ပြည်နယ်မှယနေ့အထိ Baykal သည်သမိုင်းရှုထောင့်ကိုကြည့်ပြီး 1950'den ရော်ဘာဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်နောက်ခံထားခြင်းအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုမရှိကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲ၏အခြားဥက္ကspeaker္ဌ Tansel Timur ကကျွမ်းကျင်သူများကသတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီးအစ္စတန်ဘူလ်ငလျင်ကိုသတိပေးခဲ့သည်။
“ အစ္စတန်ဘူလ်သည်သမိုင်းနှင့်ပင်လယ်မြို့ဖြစ်ပြီးငလျင်လှုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ Gölcükငလျင်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြmajorနာများကြုံခဲ့ရသည်။ 48 နာရီထက်ကျော်လွန်သောနောက်ကျမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှတ်မိသည်။ ဤသည်ခါးသောဒုအတွေ့အကြုံကိုပြသ; လာမယ့်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရေးအတွက်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အားလုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့လိုတယ်။ ”
အစည်းအဝေး၏တတိယမြောက်ဟောပြောသူမှာ Dr. အစ္စတန်ဘူလ်သည်မြို့ပြအဆင့်အတန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရပြီး၊
"အစ္စတန်ဘူလ်ကမ်းရိုးတန်းအစားမြောက်ဘက်တိုးချဲ့ချင်တယ်။ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ။ ရေကြောင်းမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည့်အစ္စတန်ဘူလ်ကဤအခြေအနေသည်ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကုန်းတွင်းမြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်၏နောက်ဆုံးစပီကာပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည် ဒေါက်တာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုအလေးပေးသော Dr. Mustafa Insel ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြေရှင်းမှုများကိုဖော်ထုတ်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Sel ယခင်ကတိုင်များ၌ရေခဲအရည်ပျော်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သော်လည်းဤသက်ရောက်မှုများကိုလည်းဤမြို့တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာလျှပ်စစ်နည်းပညာကိုကူးပြောင်းတာကိုမြန်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
WE Montrere ကာကွယ်ရမည်
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Haluk Gerçekညွှန်ကြားသည့်ဒုတိယသင်ခန်းစာတွင်၊ Kanal Istanbul သည်၎င်း၏ရှုထောင့်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဟောပြောသူမှာ Assoc ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Jale Nur Ece မှပြောကြားသည်မှာ Montreux သည် 83 နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဒေသနှင့်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောပံ့ပိုးမှုများပေးခဲ့သည်ဟုသတိပေးခဲ့သည်
Açmakဆွေးနွေးမှုများအတွက် Montreux ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်ရေလက်ကြားရှိကျွန်ုပ်တို့၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်အခွင့်အရေးများနှင့်ပင်လယ်နက်မှကျွန်ုပ်တို့၏အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးမှုကိုခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး Montreux ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်များကို Montreux မှကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အဘယ်ကြောင့် ISTANBUL ချန်နယ်မရနိုင်?
ဆွေးနွေးပွဲတွင်“ ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာ Istanbul Channel?” တွင် Marmara စောင့်ကြိုနေသောအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်။ ဒေါက်တာ Cemal Saydam, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူအသီးအသီး, တူရကီကမ်းရိုးတန်းမှပင်လယ်ကို hosting ခဲ့မှုကိုအလေးအနက်။ Saydam ကပြောကြားသည်မှာgeçmekပင်လယ်နက်မှမြေထဲပင်လယ်သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်ကမ္ဘာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရှိဆုံးပင်လယ်အခြေအနေကိုဆိုလိုသည်။ သငျသညျဤပင်လယ်နှစ်ခုနားလည်လျှင်, သင် Marmara အပြည့်အဝနားလည်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော 3500 နှစ်များအတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သော Marmara သည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်၍ အသက်ရှင်နိုင်ပါကဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Sayiz သည် Deniz ၏ asthmatic ကလေးiçinကို Marmara ပင်လယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
“ ပင်လယ်နက်မှာဒုတိယခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Marmara ပင်လယ်ကိုစီးဆင်းသွားမှာပါ။ ပေါများသောအာဟာရဓာတ်များသည်အပေါ်ယံလွှာကိုဖိအားပေးပြီးအောက်ဆီဂျင်သည်လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတဲ့အခါနောက်ပြန်လှည့်မသွားဘူး။ အတိတ်ကာလကဒီမြစ်ဟာအနံ့ခံနေသည်ကိုသင်သိသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ရွှေချိုဒါမှမဟုတ် Bosphorus သာမက Marmara တစ်ခုလုံးသေဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ ဒီသေခြင်းကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်ကိုရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုမှာအနံ့အားလုံးထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုမရှိပါ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးဟာဒီပစ္စည်းဥစ္စာတစ်သန်းကိုတောင်အနံ့ခံနိုင်တယ်။ ”
သုတေသီ Cihan Uzunçarşılı Baysal သည်နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းကို Channel Istanbul အစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Baysal၊ Kanal Istanbul ၏ကုန်ကျစရိတ်၊ စီးပွားရေး၊ ဂေဟစနစ်၊ ရေကြောင်းနှင့်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များကိုမတူညီသောအကြောင်းအရာများအရဆွေးနွေးကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူကလူတွေကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်
Iz ကျနော်တို့ Mega စီမံကိန်းများdeclaredရိယာအဖြစ်ကြေငြာသောမြောက်ပိုင်းသစ်တောဒေသနှင့်ပတ်သက်။ ဒေသခံပြည်သူများခံစားရပုံကိုပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ EIA အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြခဲ့ကြသော်လည်းကိန်းဂဏန်းများကိန်းဂဏန်းများကိုမသိသောကြောင့်သာဖော်ပြခဲ့သည်။ လေဆိပ်အသစ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ ဒီနေရာမှာလူတွေကိုအလားတူကံကြမ္မာစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ ရာစုနှစ်များစွာဤဒေသတွင်နေထိုင်သူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးတို့သည်ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင်မနေထိုင်တော့ပါ။ သူတို့မြေကိုကုမ္ပဏီကြီးများလက်ထဲအပ်လိုက်ပြီ။ ထိုကုမ္ပဏီများသည်ကျေးရွာများကိုမြေယာဖလှယ်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဒီကျေးရွာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောခဲ့တယ်။ အားလုံးနီးပါးကဒီစီမံကိန်းကိုမလိုချင်ဘူး။
စာနယ်ဇင်းသမား၊ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ပညာရှင်နှင့်စီးပွားရေးပညာရှင် Cem Seymen တို့ကမြို့၏အဏ္ဏဝါယဉ်ကျေးမှုကိုနောက်ဆုံးအစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Bandirma ကူးတို့လှုပ်ရှားမှု၏နှစ်တစ်ရာတာအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Seymen သည်အောက်ပါစကားလုံးများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
“ ဗြိတိသျှတွေက Bandirma Ferry ကိုခေါ်ပြီးသေနတ်ရှာဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ သူတို့ကAtatürkသည် Anatolia သို့လက်နက်များလျှို့ဝှက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။ Atatürkကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့စကားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ် - 'သူတို့ရှာနေတာကိုဘယ်တော့မှရှာမှာမဟုတ်ဘူး။ သောကြောင့်, ငါတို့အတွင်း၌ဇာတိမြေမေတ္တာကိုဘယ်သောအခါမျှမမြင်နိုင်ကြပါ။ ' ဒါကခမ်းနားတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါ။ မိန်းမပျိုမျှော်စင်ရှေ့မှာကျွန်တော်သွားတိုင်း Mustafa Kemal Atatürkကူးတို့ကိုရပ်ပြီးဗီဇာတောင်းရန်စဉ်းစားမိသည်။ ငါတို့ဒီနေ့ဝေးနေပြီ ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လပ်ရေးကိုသမ္မတနိုင်ငံနဲ့သရဖူဆောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။
Marine Culture session တွင်စာရေးသူ Sunay Akınကသူ၏မိန့်ခွန်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကဤမြို့မှပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံ၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲခဲ့သော Mustafa Kemal Atatürkနှင့်Bandırma Ferry တို့အားရိုသေလေးစားမှုဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ကဒီနေ့ပင်လယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်သည့် Barbaros Hayreddin, Turgut Reis, Salih Reis နှင့် Piri Reis ပညာပေးသောအရေးပါသည့်ယဉ်ကျေးမှု Kanal Istanbul အကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒီစီမံကိန်းကရေကြောင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအီဘရာဟင်အောရမ်ဒီမရီသည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင်နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ Demir ကသူ၏မိန့်ခွန်းကိုဟောပြောသူများနှင့်ပါ ၀ င်သူများအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောစီမံကိန်းနှင့်ဖြေရှင်းချက်အဆိုပြုချက်များအားလုံးကို IMM မှအစီရင်ခံပြီးသက်ဆိုင်သူများနှင့်ပြည်သူလူထုအားမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။
Canal Istanbul ဆိုပါက Marmara ပင်လယ်ထဲရှိငါးများကိုမေ့လိုက်ပါ
ဥရောပအာရှဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကတော့ Marmara ပင်လယ်ပြင်အောက်တွင်ကျင်းပမည့်
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ Rousse ဆိပ်ကမ်း
လူမျိုး၏otobosçü Bursa အထူးအဆိုပါ CHP ဖို့သာဆေးတစ်လက်အဆင်ပြေသနည်း
က Sumela ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ cable ကိုကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်
Kocaeli Ropeway စီမံကိန်းကိုလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် ... ?
Haremlik-selamlik Metrobus မယ်လို့ရှိပါသလား?
ဘာကြောင့် Channel ကို Istanbul
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ် session တစ်ခု